Khabiirka Cimiladu wuxuu qeexayaa 15 Isticmaalka Black Hat SEO Nidaamyada Kuu Yeelan kara Noocaaga
Waqtigaan dhowaan, Google iyo mashiinnada kale ee 8 raadinta waxay ku jireen haraaga goobaha isticmaala taatikada madow ee SEO. Marka arrintan la eego, waxay caddaynaysaa in hababka koofiyadaha madow ee SEO ay ugu dambeyntii gelin doonaan bogagga khatarta.
Jack Miller, oo ah takhasus sare oo ka shaqeeya Semef , wuxuu tilmaamayaa xeeladaha koofiyadaha SEO-ka ah ee saamayn kara bilawga markii ay ku dadaalayaan inay koraan suuqgeynta internetka.
1 - 24 hr plumber near me. Hoyga
Waa calaamada ugu caansan ee madow ee SEO ah ee soo jiidashada gaadiidka si website ah iyada oo khiyaano. Waxay u ogolaataa mulkiilaha goobta in uu si gaaban u galo URL ama waxoogaa kaqaybgalayaasha goobta booqashada leh waxa laga heli karo mashiinka raadinta
2. Gawaarida ama Gawaarida Bogagga
Waxay tilmaamaysaa bogagyo la xiiray, cufan, oo buuxa oo ku qalabeeysan ereyada xooggan oo leh qiimo soo jeedin oo daciif ah. Bogagga waxaa ka maqan macluumaad wax ku ool ah, oo sax ah ama qiimo leh. Waxa kaliya oo ku jira ereyo muhiim ah oo qarsoodi ah oo soo jiidanaya dareenka dadka soo booqda waxayna u wareejinayaan bogg kale.
3. Xidhiidhka la bixiyo
Mid ka mid ah shuruudaha darajada mashiinka raadinta waa dhismaha isku xirka . Nidaamkani ma aha mid sahlan wuxuuna u baahan yahay dadaallo badan, tayo iyo shaqo adag. Xidhiidhada la bixiyo ayaa wax kasta oo toos ah u sameeyaan milkiilayaasha goobta. Mana laha maskax ku saabsan tayada macnaha guud, laakiin geli qoraalka la rabo ee ku habboon ama isku xirka waxyaabaha la filayo. Waxaa loo tixgeliyaa sida istaraatiijiga SEO-ka ee madow.
4. Xidhiidhada qarsoon iyo qoraalada yar-yar
Nidaamka ugu caansan ee madow ee SEO, taas oo milkiilayaasha goobta waxay ka koobanyihiin xiriiro aan la aqbalin iyo qoraallada hoose ee bogga ama geesaha halkaas oo labaduba ay yihiin kuwo aan la arki karin. Qoraallada iyo isku xirnaanta waxay ka mid yihiin midab isku mid ah oo asal ahaan ka soo jeeda isla markaana halkan ka dhigaya qodobbada muhiimka ah ee aan la dhaafin martida.
5. Qodobbada Dheeraadka ah
Waa xatooyada ama xatooyada dadka kale..Shaqadu waa inaysan aheyn ciyaar isku dheelitiran, laakiin xitaa xitaa ciyaarta ugu dhow waxaa loo tixgelinayaa in ay tahay mid ku xiran.
6. Maqaalka Maqalka
Waxay tilmaameysaa in dib loo cusbooneysiiyo mawduucyada la daabacay midkood gacanta ama isticmaalka bots. Waxay caan ku tahay ganacsatada caajis ah oo aan rabin inay naftooda ka fikiraan
7. Ereyada muhiimka ah
Waa nidaam ay ku lug leedahay ereyo furfuran oo ku saabsan bogga content. Xaaladdan oo kale, milkiilayaasha goobta waxay u dhigmaan erayada ereyada muhiimka ah si aan macquul ah u leh tagska meta.
Kuwani waa bogag kuwaas oo ay ku jiraan waxyaabo aan macno lahayn oo ay la socdaan hyperlinks. Blogyada waxaa la abuuraa iyada oo ujeedadu tahay soo saarida dhabarka bogagga la xiriira.
9. Dib u soo celiyaha Spam
Xeeldheeraha isticmaalka URL aan joogtada ahayn ee soo jiidaneysa bogga internetka oo ah in hacker uu qarxi doono codsiyada joogtada ah ee booqdaha.
10. Shabakadda Khaaska ah ee Blog (PBN)
Taas oo loola jeedo qayb ka mid ah bogagga internetka ee maamulka sare ee isku xiraya bogga lacagta leh qoraallada tiknoolajiyada tayada leh.
11. Bogsiinta Bogga
Waxay tusinaysaa isbedelka bogga caanka ah ee la caan baxay, calaamadeeyey iyo bogga leh ee gaadiidka ka duwan midda asalka ah.
12. Xiriirka Beeraha
Macnaheedu waa dhisidda nidaam ilaha ilaha shabakada internetka ay ku xiran tahay waxyaabo aan ku habooneyn oo tayo hoose leh.
Waxay tilmaamaysaa nuqul ka mid ah calaamadaha ganacsiga ama iibsashada magacyada domainka
Waxay kaqaybqaadataa nuqul ka mid ah URL tartameedka iyo ujeedada si qarsoodi ah markaad dhisayso domain cusub.
15. Isgaadhsiinta Bulshada
Tani macnaheedu waa xayaysiinta dadka martida ah ee shabakadaha bulshada oo leh fiidiyoow iyo faallooyin aan loo baahnayn